बाबुरामको भान्छेलाई मरणासन्न हुने गरी रामधुलाई - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
बाबुरामको भान्छेलाई मरणासन्न हुने गरी रामधुलाई
‘लक्ष्मी र सरस्वती एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् ती दुवैलाई एकै स्थानमा बस्ने घर बनाउँदैछु’ भनेर नयाँ शक्तिको डंका पिटेर हिंडेका डा. बाबुराम भट्टराईका पिए भने भान्छेलाई मरणासन्न हुने गरी पिट्ने धन्दामा लागेका छन् । नयाँ शक्तिको नाममा एमाओवादी फुटाएर क्षेत्रीय राजनीतिको बिंडो थाम्ने योजनामा रहेका भट्टराईका पिए सनिप बुढाले सशस्त्र प्रहरीका परिचर (भान्छे) लाई मरणासन्न हुने गरी पिटेका छन्।
भट्टराईको सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका परिचर विष्णु श्रेष्ठलाई गत कात्तिक ६ गते शुक्रबार अपराह्न तीन बजे सानेपा निवासमा ढोका थुनेर पिटेका थिए । नयाँ शक्तिको गफ दिएर दिउँसै मापसे गरेर आएका सनिपले खाना नमीठो पकाएको भन्दै श्रेष्ठको टाउकोमा प्रेसर कुकरको बिर्कोले हिर्काएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू सानेपा निवासमा टिटी खेलेर बसेको वेला भान्छा कोठाको ढोका थुनेर मरणासन्न हुने गरी पिटेका थिए । मादक पदार्थ सेवन गरेका सनिपले श्रेष्ठको मुख थुनेर पिटेपछि रक्तमुच्छेल भएर लडेका थिए । बाहिर हल्ला गरे मारेर फालिदिने भन्दै धम्की समेत दिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा खबर सार्वजनिक भए नयाँ शक्तिको बद्नाम हुने भन्दै हुलिया र परिचय समेत ढाँटेर श्रेष्ठको स्टार अस्पताल सानेपामा उपचार भइरहेको छ।
उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । श्रेष्ठको सिटी स्क्यान गरिएको छ । भान्छा कोठादेखि भट्टराईको निवासको गेटसम्म रगतको धारो लागेको थियो । भान्छे भान्छाकोठामा ढलेपछि हल्लीखल्ली भए पनि चुपचाप स्टार हस्पिटल पु¥याइएको थियो । सनिपले आतंक मच्चाए पनि सो कुराको जानकारी नयाँ शक्तिका रणनीतिकार डा. भट्टराईलाई भने दिइएको वा नदिइएको भन्ने बारेमा जानकारी हुनसकेको छैन । यद्यपि विष्णु श्रेष्ठकी श्रीमती राममायाले भने आफ्ना श्रीमान्लाई हत्या गर्ने नियतले आक्रमण भएको बताइन् । श्रीमान्को उपचार गर्ने खर्च समेत नभएको भन्दै गुनासो गरेकी छिन् । सनिपको आतंक बाहिर ल्याउन नहुने भन्दै बाबुराम पत्नी हिसिला यमीले तानाबाना बुनेकी छिन् । बाबुरामको बेइज्जत हुन्छ भन्दै यमीले सनिपलाई कुनै पनि कुरा बाहिर नलान र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत सो कुरा नभन्न भनेकी छिन्।
भीआईपीलाई जानकारी दिइएको छ जस्तो लाग्दैन, म बडो समस्यामा परें श्रेष्ठकी श्रीमती राममायाले भनिन् । उनले आफ्ना श्रीमान्को जीवन रक्षा गरिदिन र उपचार खर्च मिलाइदिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेकी छिन् । तर डा. भट्टराईले भने सनिपलाई आफूसँगै लिएर हिंड्ने गरेका छन् । उद्दण्ड स्वभावका सनिपलाई कारबाही गर्ने आँट डा. भट्टराईसँग छ कि छैन हेर्न बाँकी छ। आजको जनआह्वान साप्ताहिकले समाचार छापेको छ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा ईश्वरको नाममा सपथ ग्रहण
नाकाबन्दीपछि चीन नेपाललाई जलविद्युतमा सहयोग गर्न तत्पर